चौबीस घण्टाभित्र डा. केसीका माग पूरा गर्न अल्टिमेटम – Sajha Bisaunee
चौबीस घण्टाभित्र डा. केसीका माग पूरा गर्न अल्टिमेटम
। ३२ असार २०७५, सोमबार १६:०० मा प्रकाशित
जुम्लामा अनशनरत डा. गोविन्द केसीका माग २४ घण्टाभित्र पूरा गर्न कर्णालीका डाक्टरहरूले सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका छन् । अनशन बसेको १६ दिनसम्म पनि सरकारले मागको कुनै सुनुवाइ नगरेको र डा. केसीको स्वास्थ्य जटिल बन्दै गएपछि डाक्टरहरूले यस्तो अल्टिमेटम दिएका हुन् ।
सोमवारसम्म केसीका माग पूरा नभए मंगलवारदेखि कर्णाली प्रदेशभर स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् । सरकारले हड्तालमा उत्रिएमा स्वास्थ्यकर्मीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिइरहेका बेला यहाँका चिकित्सकहरूले भने डा. केसीको जीवनरक्षा र माग पूरा गराउन आफूहरू जागिर नै छाड्न तयार रहेको बताएका हुन् । नेपाल चिकित्सक संघ सुर्खेत र जुम्लाले आइतवार वीरेन्द्रनगरमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर २४ घण्टाभित्र डा. केसीका माग पूरा गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका छन् । माग पूरा नभए मंगलवारदेखि कर्णाली प्रदेशमा आकस्मिक बाहेकको सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी उनीहरूले दिए ।
नेपाल चिकित्सक संघ सुर्खेतका अध्यक्ष डाक्टर नवराज केसीले भने, ‘अनशनरत डा. केसीको स्वास्थ्य जटिल बनेको छ, १६ दिनसम्म सरकारले वार्ता टोलीसमेत गठन गरेन । सरकार पेलेरै जाने तयारीमा छ, हामी डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि हदैसम्मको आन्दोलनमा जाँदैछौं ।’ डा. केसीले उठाएका माग जनताको हितमा रहेको भन्दै उनले मेडिकल माफीहरूको जालोमा राजनीतिक नेतृत्व फसेको बताए । केसीका जायज माग पूरा गराउन आफूहरू अन्तिमसम्म लड्ने भन्दै उनले अनशनरत डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि जागिर नै छाड्नु परेमा पनि आफूहरू तयार रहेको उल्लेख गरे । यस्तै नेपाल चिकित्सक संघ जुम्लाका अध्यक्ष डाक्टर मंगल रावलले डा. केसीको अनशनलाई अनावश्यक राजनीतिकरण गरिएको बताए ।
डाक्टर रावलले भने,‘सबै दलभित्र मेडिकल माफियाहरू छन्, उनीहरूले नै डा. केसीको सत्याग्रह अलफल बनाउन राजनीतिक रंग दिएका हुन् । केसीका माग देशको हितमा छन्, हामी केसीको जीवनरक्षा चाहान्छौं ।’ स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा नरहेको कर्णालीमा आएर डा. केसीले सत्याग्रह गरेको भन्दै उनले केसीका मागमा आफूहरूले पनि साथ दिएको जनाए । ‘हामी बिरामीको उपचार प्रभावित नहोस् भन्ने चाहान्छौं, तर सरकारले सहजै माग पूरा गर्ने अवस्था देखिएन’ डाक्टर रावलले भने, ‘२४ घण्टाभित्र माग पूरा नभए कठोर आन्दोलन सुरु हुन्छ, हामी सेवा बन्द गरेर संघर्षमा आउँन बाध्य भयौं । सरकारको कारबाहीसँग डराउनेवाला छैनौं, बरु हाम्रो जागिर किन नजाओस् ।’ उनले केसीको स्वास्थ्य संवेदनशील बन्दै गएको र तत्काल सरकार गम्भीर नभएमा केसीको ज्यानमा नै तलमाथि हुनसक्ने खतरा औंल्याए ।
डा. केसीका माग पूरा गराउन नेपाल चिकित्सक संघको केन्द्रिय नेतृत्वले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको कर्णालीका डाक्टरहरूको गुनासो छ । डा. केसीको सत्याग्रह कर्णालीसँग
जोडिएकाले पनि आफूहरूले प्रदेशस्तरमा नै कठोर आन्दोलन गर्न बाध्य भएको मध्यपश्चिम क्षेत्रीय अस्पतालका मेसु डाक्टर डम्बर खड्काले बताए । उनले भने,‘केसीको माग देशका लागि हो, कर्णालीका जनताको पक्षमा छ । यस्तो अवस्थामा हामी चुप लागेर बस्न सक्दैनौं, केसीको जीवनरक्षाका लागि अन्तिम विकल्पसम्म जान बाध्य हुनेछौं ।’ सोमवारसम्म केसीका माग पूरा गर्न उनले सरकारलाई आग्रहसमेत गरे । आफूहरू बिरामीलाई उपचारबाट बञ्चित गराउने पक्षमा नभए पनि डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि आकस्किम बाहेकका सेवाहरू बन्द गरेर सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने बाध्यता आएको उनको भनाइ छ । यहाँका स्वास्थ्यकर्मीहरूले अहिले दैनिक एक घण्टा काम रोकेर विरोध जनाउँदै आइरहेका छन् ।